Yize izikhathi eziningi isiphequluli siletha nezilungiselelo ezidingekayo ukuze zisebenze kahle ngokuzenzakalela, kuyiqiniso ukuthi okunye kungenziwa izinto ezingeziwe ezincane ukuze thola noma susa izici ezithile.
Zonke lezi zilungiselelo kufanele zenziwe ngokuzibeka wena engcupheni. Sivula ithebhu bese sibhala nge: config, siyathembisa ukuthi ngeke sibeke izandla zethu (okuthile okungeke kube yiqiniso) nokuvula iFirefox.
1.- Nciphisa ukusetshenziswa kweFirefox lapho kuncishisiwe:
Okusha »okunengqondo» config.trim_on_minimize = true.
extensions.checkUpdateSecurity = Amanga
network.prefetch-next = Amanga
isiphequluli.blink_allowed = Amanga
network.http.pipelining = iqiniso
network.http.pipelining.maxrequests = 8 (Okuzenzakalelayo kungama-30) IFirefox 7 iletha u-4 ngokuzenzakalela.
network.http.max-connections = 96 (Okuzenzakalelayo kungama-30) IFirefox 7 iletha ama-256 ngokuzenzakalela.
network.http.max-connections-per-server = 32 (Ngokuzenzakalelayo iyi-15) IFirefox 7 iletha i-15 ngokuzenzakalela.
network.http.max-persistent-connections-per-server = 8 (Okuzenzakalelayo kungu-6)
inethiwekhi.dns.disableIPv6 = true
Okusha »Integer» nglayout.initialpaint.delay = 0
Entsha »Logic» network.http.pipelining.firstrequest = true
security.dialog_enable_delay = 0 Firefox 7 iletha 2000 ngokwakhona.
Okusha »Okuphelele» okuqukethwe.notify.interval = 500000
Okusha »Logic» content.notify.ontimer = true
Okusha »Integer» okuqukethwe.switch.threshold = 250000
Okusha »Logic» okuqukethwe.interrupt.parsing = false
isiphequluli.urlbar.maxRichResults = 20 (Okuzenzakalelayo kungu-12)
view_source.editor.path = Indlela yomhleli ephumelelayo
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Amathiphu wokusebenzisa i-Firefox
Chidimma Agunwamba kusho
kuhle! hlola eyunivesithi yaseNigeria kulesi sixhumanisi http://www.unn.edu.ng
Phendula uChidimma Agunwamba
iyaphuka, iyalungisa. ukungahambi? ukufaka kabusha ne-voila. Futhi akuyona isayensi enhle! heh
Haha lokho kubi, kuyinto encane yokungena ekushintsheni lezo zilungiselelo
hehe kuhle ukwephula i-FF XD, angizukubeka isandla sami kepha mayelana: lungiselela ukubonga ngedatha
I-Chirsthoper Vidal kusho
i-xD. amathiphu amahle kakhulu, ngizoqoqa amanye ukuze ngisebenzise .. ngiyabonga
Phendula uChirsthoper Vidal
Umphakathi waseBrazil usilethela imiklamo ehlekisayo nguKonqui